Portfolio Diversification uye Unbalancing - Blockchain News
Kana investor kwazvo akasarudza kwavo nechido vanopedzisira cryptocurrencies uye vakadzidza yose chakarondedzera mari dzinonakidza, ndiyo nguva yokufunga nemamiriro yemberi inivhesitimendi Portfolio.
Mumwe mutori Portfolio ndiyo dzakaunganidzwa crypto zvinhu unganidzwa kuzadzisa rimwe chinangwa muchimiro mubereko. The ndechokuti, musika maitiro dzimwe nguva dzokwenyu ezvinhu akadaro, umo ndichengetedze yaivapo zvinhu ichitova kukunda guru. saka, kana wezvamatongerwe Portfolio, zvakafanira kuti unyatsoteerera kwete chete kune dzingangoitika imwe mari, asi kune nzira yokuwana kuti crypto pamusika inopiwa. uye, ehe saizvozvo, chokupedzisira ndechokuti kuita mari yako zvose muna dhenari chete netariro yokuti zvichaita kuti uve crypto shoroma.
Fast uye Scary Vs. Long uye Easy
Conventionally, mari nzira inogona muzvikamu zviviri. Long-izwi upfumi vari akasarudzwa kuchinja vanoita, vari vakagadzirira chibayiro nokukurumidza mari (kutaura zvakajeka, tinoda crypto pamusika kuti). More kubheja musika vechikamu vanovimba hasha kwenguva pfupi wokutengesera, vaizotibata mheni-kutsanya mari pamwe yakakwirira pangozi yokurasikirwa zvose kamwe.
The mubhizimisi Portfolio inogona kuumbwa maererano izvi nzira mbiri, kugova rose siyana cryptocurrencies kupinda refu uye zvenguva pfupi. Zvinokosha kuyeuka, zvisinei, kuti kana zvechigarire, yakavimbika Mari inogona nyore kutengwa ndokumirira vakabuda mutengo wavo kutyora zvinyorwa, ipapo kwenguva pfupi upfumi, chero zvazvingava, uchava zvakafanira kuti svetuka kupinda kunyatsogona kutengesa, dzidza mitemo uye tsika musika, kunyatsogona chebasa ongororo, uye nesimba kuongorora nhau pakanyorwa crypto musika.
Regai uyewo kuona kuti kunyange raiita yakavimbika mari anogona kuzvibata imwe kukodzera nenzira uye pakarepo svetuka munzvimbo dzakadzika mitengo. Vanhu aitenga Bitcoin nokuda $19,000 kashoma funga zvino yakavimbika inivhesitimendi. The musika ndiyo musika, uye kwenguva refu upfumi zvinoda Spartan murefu uye zvakasimbisa kongiri tsinga. Kwete kurasikirwa nepfungwa uye kwete kutengesa zvose zvinowanikwa yesangano pane risingamboshandisi mutengo Nde basa ane investor anenge apinda pamusika nokuda kwenguva.
Pakati Mabheya Bulls
Chimwe chezvinhu zvakawanda nzira diversifying ngozi kutora chinzvimbo pakati nzombe uye nemapere, kupatsanura yesangano nenzira kuti une chokuita zvose bullish uye bearish dzinoitwa. Pane matunhu mukana jerking pakati mumwe uye imwe nokuti kusarudza kana uchida kubatana vakachenjera kana akanaka. Pamusoro pe, vanhu vashoma vanokwanisa chinja pfungwa dzavo pakati zvaunotarisira kuwedzera uye kuwa ane crypto twa. Semutemo, wakawira pane rudo chinokosha, Ndinoda kutenda kuti zvose zvinetso ndevenguva, ari calculators vari kuvanda chinhu, uye mari kuda kuparuka makenduru kwira.
kusaenzana Izvi zvichava akakodzera ine utsinye vanoita vanenge refu akarasika kutenda zvishamiso, zvakajeka kunzwisisa anonongedzera mumusika, uye vanokwanisa kufungidzira maitiro zvose nzombe bere vaenzi.
No Kunyadziswa mu Plagiarism
Uchakwanisa kudzivisa zvikanganiso zvakawanda kana usati bhizimisi ukadzidza zvakaitika vaya vagara vari pamusika. sezvinei, pane yakawanda yakazaruka zviwanikwa, apo vanoita kubudisa mashoko avo crypto nemigove mumabhizimisi ose zuva. Tsvaka kuti Blog kana Teregiramu yaienda mugero, chaunowana kunakidza. Nyatsoteerera kutsiga Portfolio, nzira dzekuziva iyo mari vari pazviri, uye nomufambiro investor pakuparwa kurega kunotanga mumusika. Kuumba Portfolio vako muenzaniso kuti Portfolio uye, Kana zvakakodzera, kutevera investor kuti kunenge pamusoro kutenga zvitsva zvinhu.
Kusarudza yechipiri haina chokuita akatendeukira pamusoro uropi ari tinongoita kutevera kunenge kuti nevaichinja. To dating, pane dzinosvika anoverengeka crypto bots, umo muoti zuva kupa zviratidzo kutenga kana kutengesa imwe crypto twa, ichitoratidza nhamba yose Portfolio, vanotevera iro kuderedza ngozi. Mumwe mubvunzo ndechokuti haizivikanwi kuti chii zvinodiwa vatengesi seri zvikumbiro chaizvoizvo kunge, hakuna kukudzivirira kubva rurege mumabasa vakawanda pombi uye nenzvimbo dzokurasira, uye chiitiko akundikana, unogona chete kupomera kushanda ari pafoni yako.
Tichidzokera mikana mari, iyo crypto musika rinopa, chimwe chezvinhu zvakakodzera kusarudza kuti unbalancing ari Portfolio ndiyo kuparadzira yesangano kubudikidza inivhesitimendi zviridzwa. Ndiwo sei nyanzvi inivhesitimendi mari basa.
mhando iyi Portfolio vangatarira seizvi:
25% vaitungamirira mari nokuti kwenguva refu inivhesitimendi (BTC, paEti, XRP);
25% Svikiro-rokuti vagotengeseranamo pamusoro altcoins;
10% robotized kuyananisa;
10% zvokutengeserana marobhoti uye algorithmic zvokutengeserana;
10% vanotengesa pamusoro nhau (club Gainers uye vakundwa);
10% upfumi mu vaizotibata ICOs;
10% ane ngozi crypto midziyo.
The chikamu migove ari Portfolio akadaro achavaponesa sei ainyatsoziva uri imwe mubhizimisi nzira uye sei zvakakodzera kuti yanhasi mamiriro ezvinhu ari crypto pamusika.
A crypto Portfolio inogona kuumbwa uye kunobva kumatunhu mari sezvo zuva changed zvakarongwa tichitarisa pamutemo mutemo wenyika cryptocurrency munyika vanogona yekudyidzana kupesvedzera prices. Unogona kuvimba chikamu Portfolio kusvika mari maneja, zvisinei, muchiitiko ichi, uchava kubhadhara chikamu Purofiti vakapiwa.
Chero zvazvingava, kamwe akaumba, ari crypto Portfolio haazovi mose hwako upenyu. Zvichava vanofanira aongorora uye “runozununguswa” pamwe musika kuchinja, pamwe chitarisiko vaizotibata uye akatsiga mari itsva, uye, pakupedzisira, pamwechete kurega kunotanga mumusika, kana kunyange waaivimba crypto zvinhu zvinokonzera chido kutengesa zvinhu zvose uye vayambukire Fiat mari kukwira stocking.
Crypto Retail Pos ...
Previous Post:United Colors pamusoro Benetton unotanga kubvuma cryptocurrency muna Lithuania
Next Post:South Korea kwakaita regulator inonzi zvirevo 12 cryptocurrency exchanges kuti adzokorore mutengi zvibvumirano
Kubvumbi 17, 2018 pa 5:00 PM
Chivabvu 15, 2018 pa 3:54 AM
Chivabvu 28, 2018 pa 12:40 PM
Chikumi 4, 2018 pa 9:53 PM